Indlu encinci kwisikwere
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFrancesco iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu ibekwe kanye ekungeneni kwesikwere sedolophu encinci yaseTreglio. Ifenitshala iyinto yakudala.
Kuyenzeka ukuba kuhlaliswe ubuninzi beendwendwe ezi-3.
Kukho ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yewadilophu kwigumbi lokuhlala.
Ukusuka ekhitshini okanye kwi-driveway esecaleni yabucala unokufikelela kwiveranda egqunywe kakuhle.
Kumgama wokuhamba kukho iibhaka, iibhari ezi-2, iimarike, iiposi, ii-ATM, iicuba.
Ifikeleleka ngemoto okanye ngesithuthi sikawonke-wonke:
Lanciano - 6 km
San Vito Marina - 10 km
Uhola wendlela - 3km
Indlu ixhotyiswe ngezitya ezininzi kunye nezixhobo zasekhitshini, i-oven kunye, i-oven yombane, i-dishwasher, isinki yangaphandle, indawo yokomisa, umatshini wokuhlamba, AKUKHO TV yesathelayithi, isomisi enwele.
ITreglio yidolophu encinci. Indawo efanelekileyo kwiintsapho. Eyaziwa kakhulu ngomthendeleko we "Borgo Rurale" wewayini, i-chestnuts kunye neoli entsha eyenzeka ngempelaveki yokuqala kaNovemba. Ehlotyeni, nangona kunjalo, imithendeleko yedolophana igxininiswe kwixesha le-15 ka-Agasti.
Unxweme, kwelinye icala, lunokufikelelwa ngemoto ngemizuzu eli-10 kwaye unokufikelela ngokulula kwiidolophu zaseSan Vito, eOrtona, eRocca San Giovanni naseFossacesia ezithi kunye zenze indle engonakaliswanga "Costa dei Trabocchi" eqhelekileyo kule ndawo. kunxweme lwaseAbruzzo. Apha sifumana ngokuchanekileyo oomatshini bokuloba "Trabocchi" baxhonywe phezu kolwandle apho unokungcamla iiresiphi zekhitshi lethu.
Kodwa i-Abruzzo idume ngokuba nolwandle kunye neentaba ezikufutshane kakhulu kwaye i-Treglio ikwayindawo efanelekileyo apho ungaqala khona ukufumanisa i-majella edlula kuqala kwi-Lanciano ekufutshane kwaye emva koko ufumene iilali ezininzi zeentaba.
Ho 46 anni, sono sposato ed ho una figlia di 7 anni. Lavoro in proprio nel settore e-commerce. Amo viaggiare in famiglia ma la mia passione più grande è viaggiare in moto con la mia Ducati Scrambler!
Ndihlala 6km kude nekhaya kwaye ndisebenza 15km kude. Ndifumaneka kwi-check in kwaye ndijonge kwaye nayiphi na enye imfuno ngaphambi kwe-9 am nasemva kwe-6 pm okanye ngefowuni. Noko ke, ngempela-veki ndisoloko ndifumaneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Treglio